Waa maxay Midgaan ama mid go ?
Midgaan wa akalamada qaaxada ku noqotay dad magaca iyo diin iyo dadnimo iyo quruxba kual wadaaga waa magaca boqolaal sano ka hore loo bixiyey dad inala mid ah oo walal aheen ah kana dhigay dad aan inga mid ahay.
Migo macanihiisu waa maxay?
waa mid baa dhintay.
markaa maxaa laga wadaa mdi baad dhintay maxaa se loogu bixiyey dadkan waa suaal is wayadiin leh wax sifiican uga jawaba oo somali ahna lama hayo.
qof walba soo somali ah waa arin madax ka saran in uu raadiyo ciladu meeshay kaga jirto taariikhdan qaldan ee somalida maanta hadii somali oo dhan la eego mid walba waxay abatisiinadiisu ku soo dhamaataa somali waa waxyaabahaan la yaaba kuna qoslaa markan is waydiiyo kalaya hada qabiilkaa ka dhalatay oo ilaa intaa socotid maxay abtirsiinadadu ugu soo dhamataa somali oo meel kale u geli waydaa
Quursigu qiil m aleeyahay